Ahoana no nampiofanina ny feon'ny fieritreretanao? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Ny sasany dia tsy miahiahy, fa diniho ny fihetsika heveriny ho tsy dia ilaina loatra na mieritreritra fa tsy ho tratra izy ireo. Renay daholo ny olona nilaza fa tsy manimba ny ataony ny ataony; fa maninona no tezitra?
Ny hafa dia manao ny tsara, fotsiny satria izay no tsara. Inona no antony mahatonga ny sasany hanana feon'ny fieritreretana efa misy tsara nefa ny hafa toa tsy dia miraika loatra amin'ny vokatry ny zavatra ataony na manakana azy tsy hanao? Avy aiza ny tsy fivadihana?
Rehefa nanao fitondran-tena tsy mendrika tamin'ny mbola kely aho, dia nataon'ny ray aman-dreniko ho takatro ny zavatra nataoko ary nahatsapa ho meloka izany aho. Nanampy ahy hanamafy ny feon'ny fieritreretako ny fahatsapana. Hatramin'izao, rehefa manao zavatra tsy mety aho na mieritreritra ny tsy mety aza na manana ny eritreritra diso, dia mahatsiaro malahelo aho ary miezaka mihaino ary avy eo manitsy ilay olana.
Ny Fanahy Masina tokana manampy antsika hahatratra ny fahamarinana dia ny Fanahy Masina. Ny tsy fivadihana dia avy amin'Andriamanitra. Ny fitarihana ny feon'ny fieritreretana mora dia mitombo rehefa mihaino sy mamela ny Fanahy Masina hitarika antsika isika. Tsy maintsy ampianarina ny tsy fitovian'ny tsara sy ny ratsy ny zanatsika ary aseho ny fomba hihainoana ny feon'ny fieritreretan'Andriamanitra. Mila mianatra mihaino isika rehetra. Nomen'Andriamanitra antsika ity fanaraha-maso namboarina ity mba hanampy antsika hiaina fiainana tsy misy fahamarinan-tena ary hifanaraka.
Ahoana no nampiofanina ny feon'ny fieritreretanao? - Voatsongo amin'ny dikany tsara na niboridana amin'ny tsy fampiasana azy? Aoka isika hivavaka mba hanenonan'ny Fanahy Masina ny fahafantarantsika ny tsara sy ny ratsy mba hahafahantsika miaina fiainana tsy mivadika.